Wepamusoro 11 Cerebral Palsy Scholarship 2022
2022 Yepasi Pose uye Yemunharaunda Scholarship | Kudzidza Kune Dzimwe Nyika Mikana | Dzidzo Grants uye Mari |
Mudzidzisi Akazara Scholarships
Wepamusoro 11 Cerebral Palsy Scholarship
March 1, 2022 Ezeya Tadheo
Pano iwe unogona kuwana ruzivo nezve cerebral palsy kudzidza uye kuti vanhu vane hurema uu vanogona sei kuwana aya masomo.
Kune vanhu vazhinji pasirese vari kutambura nechirwere chimwe, chirwere, hutachiona, kana hurema, kana imwe uye vanhu ava zviri pachena vanoda kutarisirwa chaiko. Vazhinji vakaremara, semuenzaniso, havagone kuzviriritira uye kuvimba nerupo rweveruzhinji.
Veruzhinji vanobva vavabatsira kuburikidza nesangano rerudo nemasangano uye zvimwe zvipo zvekuvabatsira nezvavanoda. Dzimwe nguva zvipo izvi zvinodarika kugadzirisa nyaya dzakakosha uye voenderera mberi nekuvabatsira mune zvimwe zvido zvakaita sekufunda kune avo vanofarira kuwana dzidzo yepamusoro.
Mune ino posvo hazvo, hatisi kuzotaura nezve izvo zvakakosha zvido zvevakaremara asi tichitarisa pane iwo masomo anonyatso kureva vanhu vanotambura necerebral palsy.
Nekudaro, kana iwe uri munhu ane hurema hwehurema hweperesi kana iwe uchiziva mumwe munhu ari kutambura nazvo unofanira kuvaratidza ichi chinyorwa sezvo chingavabatsira zvikuru.
Chinyorwa checerebral palsy kudzidza chakatsanangurwa muchinyorwa chino uye iwo masomo akagadzirirwa kukurudzira vanhu vanobatwa nehurema uhu. Vanhu ava, zvakanyanya sevamwe vanhuwo zvavo, vane zviroto, zvishuwo, uye zvinangwa zvavanovavarira kuzadzisawo.
Kubudikidza neaya ecerebral palsy masomo, ivo vanogona, neimwe nzira kana imwe, kukamba kutanga kwavo kurota kungave kuburikidza nekoreji, yunivhesiti, kana yekosi institution. Zvakare, ichasimudza kwazvo mweya yavo kuti nharaunda, nzanga, uye nepasirese vane hanya navo nezvavari uye nezvinangwa zvavo muhupenyu.
Hauna hurema uhwu asi ungangoda kubatsira munhu anazvo uye asingatombozivi kuti anozviziva sei kana kuti asingazive zvazvinoreva. Study Abroad Nations ndakakufukidza.
Chii chinonzi Cerebral Palsy?
Cerebral palsy chirwere chekuzvarwa kwekufamba, mhasuru toni, kana chimiro chakakonzerwa nekusagadzikana kwehuropi. Kurapa kunogona kubatsira asi mamiriro acho haakwanise kurapwa _kuburitswa kubva kuGoogle
Nekuda kweiyi mhasuru kusagadzikana kufamba kwavo kunogona kuoneka kusinganetsi, nepo vamwe vachigona kufamba vakazvimiririra vamwe vanofanirwa kushandisa wiricheya.
Vanogona here vanhu vane cerebral palsy kuenda kukoreji?
Kufungisisa kana vanhu vane cerebral palsy vachigona kuenda kukoreji, yunivhesiti, kana yekudzidzira chikoro? Ehe! - mhinduro kune iyo ndiHungu! - vanogona kuenda kune chero yepamusoro institution yesarudzo yavo zvakangofanana nechero mumwe munhuwo zvake.
Zvave zvichiratidzwa kuti cerebral palsy haina kukanganisa ungwaru uye vanhu vane hurema vanogona kuve neiyo yakafanana IQ seyese munhuwo zvake munhu.
Pasina imwezve ado, ngatipindei muchinyorwa chikuru. Iva nekuverenga kukuru!
Cerebral Palsy Kudzidza
ABC Mutemo Centres Cerebral Palsy Yegore Scholarship
PO Postili Undergraduate Scholarship
John Lepping Chirangaridzo Scholarship
Microsoft Akaremara Scholarship
Iyo Charlotte W. Newcombe Foundation Scholarship yeVadzidzi Vane Urema
Kuberekwa Kukuvara Gweta Gweta Cerebral Palsy Scholarship
Bryson Riesch Paralysis Foundation Scholarship
McBurney Scholarship yeVadzidzi Vane Urema
North Central Kiwanis Chirangaridzo Fund Fund Scholarship
Izvi zvinotevera runyorwa rwakanyorwa uye ruzivo rwe cerebral palsy kudzidza:
O. Postili Undergraduate Scholarship
AmeriGlide ikambani inopa uye inogovera ese marudzi zvigadzirwa zvepamusha senge maelevhe, mawiricheya anosimudza, uye zvimwe zvigadzirwa zvekufamba.
Iyi kambani - AmeriGlide - inogadza iyo AmeriGlide Achiever Scholarship kuti ipe yakazara-nguva vadzidzi vekoreji vanoshandisa bhuku remanyorerwo kana simba wiricheya kana yekufambisa sikuta (sezvo cerebral palsy vanhu vanoshandisa chishandiso ichi, ivowo vanogona kunyorera ichi kudzidza). Mubairo we $ 2,500 ichapihwa kune mumwe munyoreri kubhadhara mari yechikoro nemabhuku.
Kana iwe uchifarira iyi kudzidza wobva waita zvinotevera zvinodiwa kuti uve unokodzera:
Vanyoreri vanofanirwa kunyoreswa senge undergraduate kana vakapedza kudzidza kukoreji kana mana emakore maviri koreji inozivikanwa muUnited States
Unofanira kunge uine rinenge gore rimwe reruzivo hwekoreji
Iyo shoma GPA ye3.0 inodikanwa
Unofanirwa kuve mugari weUnited States kana kubata vhiza yemudzidzi inoshanda zvinoreva kuti vadzidzi vekunze vanogona kunyorera.
Pedzisa kunyorera uye tumira mhinduro kumubvunzo wenyaya - "Ndezvipi zvinangwa zvaunazvo zvebasa rako / hupenyu, nei uine izvo zvinangwa, uye chii chinokukurudzira kuti uzvizadzise?"
Kumbirira ruzivo pano
Ichi ndicho chimwe chegore negore cerebral palsy kudzidza chinopihwa kune mumwe munhu anenge achitsvaga ari kutsvaga, mukugadzirisa kana kuwana dzidzo yepamusoro pachikoro chakabvumidzwa muUnited States kungava semunhu akapedza kudzidza kana kuita undergraduate mudzidzi.
Kuti unyorere iyi kudzidza, iwe unofanirwa kupedzisa iyo kudzidza, kuendesa yepamutemo chikoro gwaro uye rondedzero isingapfuuri maviri akanyorwa, asina-akapatsanurwa mapeji anotsanangura maitiro awakanganiswa necerebral palsy.
INCIGHT ndeyekudzidzira kwakawanda kune avo vakaremara vachiita kuti zvipfuure kune imwe yehuropi hwepalsy kudzidza. Ivo vanofarira vanonyorera vanofanirwa kunyoreswa muyunivhesiti inozivikanwa, koreji, kana yekosi institution.
Kuti uve unokodzera iyo Incight mubairo we $ 1,000 XNUMX vanyoreri vanofanirwa kuongororwa vane cerebral palsy kana humwe hurema uye kuratidza humbowo, kuve mugari weWashington, Oregon, kana California. Vanyoreri vanofanirwa zvakare kuratidza kwakanakisa kuita kwedzidzo uye sevhisi kunharaunda yavo kuti vagamuchire iyi kudzidza.
Iyo Postili undergraduate kudzidza ndeimwe ye cerebral palsy kudzidza - kwete kwete chaizvo - asi kumapoka anomiririrwa kusanganisira vadzidzi vakaremara. Nekudaro, kana iwe ukapokana necerebral palsy unogona kunyorera ichi kudzidza.
Iko kukosha kweiyo masomo ndeye $ 4,000 inopihwa gore rega - inovandudzwa kweanosvika makore mashanu - kune 2-7 vakuru vechikoro chesekondari kubva kumapoka anomiririrwa. Munyoreri anofanira kunge aine shoma GPA ye3.0 pachiyero che4.0 uye aratidzira kugona kwakasimba mune zvedzidzo nesainzi.
Mubhizimisi anofanirawo kuva nechishuwo chakasimba chekuita mabasa muunyanzvi hwemagetsi, unyanzvi hwekombiyuta, kana kombiyuta yesayenzi uye kuratidza kudiwa kwemari. Vagari vemuUS chete ndivo vanokodzera kunyorera.
Mubairo wese weiyi kudzidza ndeye $ 5,000 uye yakagadzirirwa vadzidzi vane hunyanzvi hwepanyama kana hwepfungwa avo vanoda kuenderera mberi nedzidzo yavo munzvimbo yepamusoro. Sezvo cerebral palsy iri hurema iyo inobata nezvinoitika, saka unogona kunyorera ichi kudzidza.
Vadzidzi chete ndivo vanogara muNY, NJ, kana PA ndivo vanogona kunyorera iwo kudzidza.
Microsoft, iyo hofori tech kambani - inogadzira iyi dzidziso yekupa simba uye kugonesa vanhu vakaremara izvi zvinosanganisirawo vanhu vane cerebral palsy. Izvi zvinogadzira iyo Microsoft Disability Scholarship pakati pepamusoro cerebral palsy kudzidza ine kukosha kwe $ 5,000 kwemakore mana.
Iwo kudzidza kwacho kunopihwa kune wepamusoro chikoro chepamusoro nehurema senge cerebral palsy vanovavarira kuenda kunzvimbo yekudzidzira kana yekudzidzira kuita basa muhunyanzvi. Mubhizimisi anofanirawo kuva neCGPA shoma ye3.0 kana yepamusoro, kuratidza hutungamiri mano uye mari inoda.
Zvimwe zvinyorwa zvinyorwa zvitatu, runyaya, gwaro redzidzo, uye tsamba mbiri dzekurumbidza.
Iyi hwaro inopa mari yemari kune vadzidzi vakaremara senge cerebral palsy, autism, kupofomara, nezvimwewo Iyo masomo inopfuura seimwe yehuropi hwepalsy kudzidza kubva kune vanhu vane hurema vanogona kunyorerawo.
Hapana zvipo zvinopihwa zvakanangana nevadzidzi vega pachinzvimbo izvo zvinopihwa nemakoreji nemayunivhesiti ayo akabatana neNewcombe Foundation.
Iwo mayunivhesiti akabatana uye makoreji ndeaya:
Edinboro University yePennsylvania
Long Island Yunivhesiti Brooklyn Campus
Ichi ndicho chimwe checerebral palsy masomo akagadzirirwa chete vadzidzi vanotambura nehurema uhu kwete hurema hwekufunda sevamwe vari pamusoro.
Iko kukosha kweiyo masomo ndeye $ 2,500 yakapihwa kumudzidzi akanyoresa kana kugamuchirwa muchikoro chesekondari - koreji, yunivhesiti, kana kudzidziswa kwehunyanzvi - ine GPA ye2.5 kana yakakwira. Vanyoreri vanofanirwa zvakare kuratidza kuongororwa kwecerebral palsy.
Ivo vanhu vane cerebral palsy kana vane mwana akaremara vanogona kunyorera ichi kudzidza. Iyo iri $ 2,000 kusvika ku $ 4,000 kudzidza yakapihwa kune vaviri kana vatatu vevanhu vakadaro vakatonyoreswa kana kuda kuita muchirongwa chemakoreji kana maviri emakoreji.
Mubhizimisi anofanira kunge ane GPA shomanana ye2.5 nechinyorwa chemashoko mazana maviri kana zvishoma zvichitsanangura zvikonzero nei munhu anenge akakumbira akakodzera kudzidza uye zvinyorwa zvepamutemo. Iwo kudzidza kwacho kunowanikwa kune vanhu muUnited States asi kukoshesa kuchapihwa kune vanobva Wisconsin.
Ichi chizere kudzidza kune vanhu vanorarama neimwe nzira yekuremara kana imwe yakadai secerebral palsy, ichiita kuti ipfuure seimwe yecerebral palsy kudzidza. Iyi hunyanzvi hwekuremara inongobatika kuYunivhesiti yeWisconsin-Madison, ndiko kuti, vadzidzi vanoda kunyorera ichi kudzidza vanofanirwa kunyoresa muchikoro chebachelor's, master's, kana doctorate kuyunivhesiti.
Iwe unogona kunyorera iyo kudzidza kana iwe uine chirwere chakaremara senge cerebral palsy uye mugore rako rekupedzisira kuchikoro chesekondari uye chinangwa chekunyoresa kuYunivhesiti yeWisconsin-Madison. Iwe unogona zvakare kunyorera kana iwe watove wakanyoresa kuyunivhesiti.
Mamwe magwaro ekunyorera yeiyo kudzidza anosanganisira maviri mareferenzi tsamba uye gwaro redzidzo redzidzo yakambopedzwa. Iyo yakavhurika kune vese vekunze uye vepamba vadzidzi.
Ichi chikoro chegore negore chevanhu vane cerebral palsy, uye kana chakavharwa kwegore kana iwe usati wakunda gore rino unogona kugara uchiedza zvekare kwegore rinotevera. Iwo kudzidza kwacho ndekwevanhu vakawanikwa vaine hutachiona uye vakanyoreswa muchirongwa chakabvumidzwa kuyunivhesiti, koreji, kana nzvimbo yemabasa.
Idzi ndidzo cerebral palsy masomo iwe aunogona kunyorera kuti akubatsire iwe uye kubatsira mukudzima yako koreji kana kuyunivhesiti mari yechikoro.
Vana vane cerebral palsy vachasangana nematambudziko akawanda mukufambira mberi kusvika pakuva vanhu vakuru, rusununguko, uye kuenda kukoreji kupfuura vana vakasiyana.
Nekusagona chaiko, kune zvakawanda zvakavharika nzira kuti upfuure, asi kune zvakare zviwanikwa zvinosanganisira rubatsiro rwemari, zvigadzirwa zvekubatsira, varairidzi, uye zvimwe zvinogona kubatsira mumwe munhu kuenda kukoreji uye kubudirira ipapo
Mukuda kubatsira mberi, isu pa Study Abroad Nations wakagadzirira chinyorwa ichi kuti unzwisise zviri nyore uye mawaniro aungaita aya anobatsira kuti auye kwauri.
Mune ino kesi, zvakadaro, izvi zvinobatsira zviri muchimiro chedzidzo dzinokubatsira iwe kuburikidza nekoreji kana kuyunivhesiti kana kudzidziswa kwehunyanzvi kuti uwane hunyanzvi hwawagara uchitsvaga zvisinei nehurema hwako.
Social Security Kuremara Scholarship - Zvinodiwa, Kunyorera, uye Nhoroondo
13 Koreji Scholarship yeVadzidzi vane Autism
Wepamusoro 17 Weird Canada Scholarship; Kubhadhara Kwakanyanya
Wepamusoro 13 Scholarship Yekudzoka Vadzidzi
Wepamusoro 15 Asina Kuzivikanwa Scholarship muCanada
Ona Zvimwe Zvinyorwa Zvangu
Thaddaeus ndiye anotungamira mugadziri wezvinyorwa paSAN ane anopfuura makore mashanu echiitiko mumunda wehunyanzvi hwekugadzira zvemukati. Akanyora akati wandei anobatsira mapurojekiti eBlockchain munguva yakapfuura uye kunyangwe nguva pfupi yadarika asi kubvira 5, anga achinyanya kushanda mukugadzira madhairekitori evadzidzi vanoda kudzidza kunze kwenyika.
Paanenge asiri kunyora, ari kuona anime, kugadzira chikafu chinonaka, kana kunyatsotuhwina.
8 Zvikoro Zvakanakisisa Mumhanzi muCanada
11 Zvikoro Zvakanakisisa Mumhanzi muSingapore
Vepamusoro gumi nevaviri veMahara Online MBA Makosi Ane Chitupa
Maitiro Ekutora MBA muNorway
Mudzidzisi Akazara Scholarships Masters Scholarship Postgraduate Scholarship Matipi eScholarship Kudzidza Kunze Kwenyika Gwara Kudzidza Abroad neScholarship Nyika dzakabatana Scholarships
cerebral palsy kudzidzakudzidza kune vakaremara
Previous Post:10 Pamusoro Pamhepo Kuvaka Management Degree zvirongwa
Next Post:9 Mahara eBhaibheri Dhigirii Yekunyorerana Makosi
Pingback: Wepamusoro 15 Chirwere Chisingaperi Scholarships kune Vadzidzi 2022
ini wazivisa pamusoro kutevera-up nevamwe mail.
ini wazivisa mapango itsva e.
edza basa rekunyora rondedzero naWritix kuwana UK nyanzvi rubatsiro.
Joinha Yedu Nyowani Yenyika Dzese Scholarship Mapoka Pano
Gamuchira ruzivo rwechizvino-zvino pamusoro pechirongwa chichienderera mberi cheufundu uye taurirana nevadzidzi vepasirese pane kudzidza kubva pasirese.
Join our International Scholarship Teregiramu Boka (Kukurukurirana Kunogoneswa)
Joinha Wedu International Scholarship WhatsApp Boka 2 (Kukurukurirana Hakuna Kugoneswa)
Tevedzera tiri Twitter kuti tione yedu yazvino ma tweets pamikana uye kudzidza kunze kwenyika.